Madaxda Puntland iyo Jubbaland oo kusoo wajahan Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxda Puntland iyo Jubbaland oo kusoo wajahan Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey
Madaxda Puntland iyo Jubbaland oo kusoo wajahan Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey
Xorriya.com: Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland, Axmed Madoobe iyo Puntland, Siciid Deni ayaa lagu wadaa in ay gaaraan magaalada Muqdisho ee casimadda dalka.
Wafdi heer sare ah oo hordhac u ah imaatinkooda ayaa shalay galab soo gaaray magaalada. Waxaa la dareemayaa qaban qaabo xoogan oo lagu soo dhaweynayo madaxdaan lagu wado in maalinta berri oo Isniin ay yimadaan.
Beesha caalmka ayaa ku cadaadis xooggan saartay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland si ay u yimaadaan magaalada Muqdisho, lana kulmaan madaxweyne Farmaajo si dalka ay uga dhacdo doorasho loo wada dhanyahay.
Wixii war ku soo kordho kala soco Xorriya.com